I-Raw Coluracetam powder (135463-81-9) Abakhiqizi - Phcoker
I-Raw Coluracetam powder (135463-81-9)
I-Raw Coluracetam powder iyilungu elisha nelingavamile eklasini le-racetam le-nootropics yokwenziwa. Ekuqaleni ithuthukiswe njenge ...
Umthamo: 1180kg / inyanga
I-Raw Coluracetam powder (i-135463-81-9) ividiyo
I-Raw Coluracetam powder (MKC-231) yisisetshenziswa somuthi we-racetam okuthiwa yi-como nootropic. Ayinayo ubufakazi obuningi bokufaka uphenyo, kepha izindlela zokusebenza (kanye nokuhleleka) zibonakala zihluke kakhulu kwezinye izinhlanganisela ze-racetam njengePiracetam noma i-Aniracetam.
I-Raw Coluracetam powder ibonakala isebenzisana nenqubo eyaziwa ngokuthi i-HACU emfushane kakhulu (i-HACU okwesikhashana), okuyinto isinyathelo sokulinganisa isilinganiso sokudweba se-neuron ukuze kufakwe phakathi kwe-neurotransmitter acetylcholine. Ukwandisa isilinganiso se-HACU kubonakala kukwandisa umsebenzi we-nelinon cholinergic, ngakho-ke kuyisisindo esifunyiwe sokuthuthukiswa kwengqondo.
I-Raw Coluracetam powder (135463-81-9) Siziqu
Igama Product I-Raw Coluracetam powder
Igama leKhemikhali N-(2,3-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydrofuro[2,3-b]quinolin-4-yl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide
Brand NAme Ayikho idatha etholakalayo
I-Drug Class Ayikho idatha etholakalayo
CAS Inombolo 135463-81-9
I-molecular Fi-ormula C19H23N3O3
I-molecular Weziyisishiyagalombili 389.4
IMisa ye-Monoisotopic I-341.174 g / mol
IMisa yangempela I-341.174 g / mol
I-Half Half-Life Ayikho idatha etholakalayo
Color I-White kuya ku-Cyrstalline e-Off-White Eqinile
Sukufaneleka Ayikho idatha etholakalayo
Sukuhlushwa Tukushisa Gcina ekamelweni lokushisa
Ci-erracetam Aukuphikisana I-Raw Coluracetam powder (MKC-231) yisisetshenziswa somuthi we-racetam okuthiwa yi-como nootropic.
Umswakama omkhulu we-Coluracetam powder (135463-81-9) Incazelo
I-Coluracetam (i-MKC-231) isisetshenziswa somuthi we-racetam esithathwa njengengxenye ye-nootropic. Ucwaningo lubonisa ukuthi lungathuthukisa ukuqonda nokukhumbula, futhi abasebenzisi bathi bayaphinde bathuthukise ukuhlushwa, ukugxila, nombono.
I-Coluracetam powder yenza ngokuyinhloko njengomgqugquzeli we-choline owenza ngokuthinta umsebenzi wokukhumbula imemori. Lokhu kuthuthukisa ngokukhethekile ukuhambisana nokulingana okuphezulu, ukukhula kwamazinga we-neurotransmitter acetylcholine ngokuhlinzeka okuningi kwe-choline lapho kwenziwa khona. Njengoba i-acetylcholine yi-neurotransmitter ehlobene kakhulu nenkumbulo nokuqonda, kukholelwa ukuthi lo msebenzi ungumthombo oyinhloko wamakhono we-nootropic we-coluracetam.
I-Coluracetam inamandla kakhulu futhi idinga umthamo omncane kakhulu kunamanye ama-nootropics esiklasini se-racetam. Kuyashesha, kufinyelela emazingeni aphezulu e-plasma ngaphakathi kwemizuzu ye-30 yokungenisa, kodwa emazingeni amahora amathathu ahla.
I-Raw Coluracetam powder (135463-81-9) Inqubo yesenzo
I-Coluracetam ithuthukisa ukufakela kwe-choline (HACU) ephezulu-esondelene, okuyisinyathelo sokulinganisela-isilinganiso se-acetylcholine (ACh) synthesis. Izifundo zibonise i-coluracetam powder ukuze kuthuthukiswe ukukhubazeka kokufunda kumthamo owodwa womlomo owanikezwa ngamagundane abhekene ne-neurotoxin ye-cholinergic. Ucwaningo olulandelayo luye lwabonisa ukuthi lungabangela imiphumela engapheliyo yokuziphendulela emagatsini aphethwe yi-nelintoxin ngokuguqula isimiso somthethonqubo we-conline.
Izinzuzo of Raw Coluracetam powder (135463-81-9)
I-Coluracetam ingathuthukisa inkumbulo nokukwazi ukufunda
I-Coluracetam ingasiza ekwelapheni ukucindezeleka okumelene nezidakamizwa
I-Coluracetam inganciphisa ukukhathazeka nokukhathazeka
I-Coluracetam ingase isekele i-neurogenesis (ukukhula kwamangqamuzana wesisindo)
I-Coluracetam ingasiza ekuphatheni i-schizophrenia
I-Coluracetam ingathuthukisa amehlo akho
Kunconywe ama-Raw Coluracetam powder (135463-81-9) Isilinganiso
Iningi locwaningo olwenziwe nge-coluracetam lwenziwa ezilwaneni kunabantu, ngakho-ke awekho imihlahlandlela yokulandelwa kwemvelo eyamukelekile emhlabeni wonke. Ibanga le-dosage elisebenzayo lichazwe ngokujwayelekile njenge-5-20 mg. Abasebenzisi be-coluracetam baye babika amanani amaningi ahlukahlukene alawulwa ngomlomo nangezingqikithi.
Impendulo yomsebenzisi ibuye yathi ukubekezela kwe-coluracetam powder kungathuthuka ngokushesha. Njengayo yonke imithi, ikakhulukazi i-nootropics, kungcono ukuqala ngamanani amancinci bese uphakamisa umthamo kancane kancane njengoba umzimba wakho uphendula futhi ulungisa imithi. I-Coluracetam ayiyona into enobuthi futhi ibhekwa ukuthi ibekezelelwe kahle futhi iphephile.
Okuqhamuka uma udla imishanguzo of I-Coluracetam powder (135463-81-9)
I-Coluracetam powder ayiyona into enobuthi. Ngakho-ke kubhekwa njengokubekezela kahle nokuphephile.
Imiphumela emibi ayifani kodwa ingafaka ukukhathazeka, ukukhathala, ikhanda, ukwethuka nokucabangela. Futhi, imiphumela emibi ngokuvamile iwumphumela wokulinganisa okungavamile kwe-nootropic.
Abasebenzisi abaningi bokuqala besikhathi se-Coluracetam umbiko wokukhathala okuvame ukuwumphumela wokuqala ngezinga eliphezulu kakhulu.
Ukubuyekezwa Kwezinzuzo Zempilo zeNew Powerful Nootropic Coluracetam eBongo
Isengezo seGalantamine Hydrobromide Supplement: Ingabe Ngumuthi Omuhle Wesifo Se-Alzheimer's?
I-Nootropics PRL-8-53: Ingabe Iyayithuthukisa Ngempela Ikhono Lokukhumbula Nokufunda?
I-Cycloastragenol Supplement: Izinzuzo, Isikali, Ukuphepha Nocwaningo